कार "फिएट Tempra": विवरण, विनिर्देशों र समीक्षा
1990 देखि 1998 को लागि: परिवार midsize कार "फिएट Tempra" उत्पादित इटाली गरेको 8 वर्ष। यो मोडेल एक मिसिन, को Regata रूपमा चिनिने बदलिएको थियो। "फिएट गरेको" दावी को नवीनता जस्तै "प्यूजिओट 306" र "फोर्ड एस्कर्ट" को रूपमा मोडेल को लागि एक प्रतियोगी हुन। Admittedly, को निर्माताहरु साँच्चै लोकप्रिय भएको छ कि एक मिसिन उत्पादन व्यवस्थित। र यसको बारे अझ भन्नुहोस् गर्नुपर्छ।
मोडेल बारे छोटकरीमा
को नब्बे को दशक मा यो धेरै लोकप्रिय ठूलो परिवार पालकी थियो, त्यसैले विकासकर्ताहरूले को मुख्य लक्ष्य एक विशाल र आरामदायक कार सिर्जना भएको थियो। 1685 मिमी - लम्बाइमा पालकी 4355 मिमी र चौडाई छ। विश्वव्यापी धेरै अन्य आयाम थियो। यसको लम्बाइ 110 भन्दा मिमी थियो। Wheelbase, रूप, साँच्चै, र अरू सबै कुरा एउटै थियो, र पालकी, र गाडी - 2540 मिमी।
"फिएट Tempra» प्रकार भनिने मोडेल को आधार गठन समान मंच मा निर्माण गर्ने निर्णय गरे। चाखलाग्दो कुरा, ब्राजिलका नागरिकहरु छैन बहुमुखी संग किन्न सकिएन मात्र पालकी, यो अर्को संस्करण उपलब्ध भएको छ। यो 2-ढोका स्टेशन गाडी, 4-सिलिन्डर, 2-लीटर को हुड राखिएको छ जो थियो turbocharged इन्जिन।
थप रोचक "फिएट Tempra" किनभने यसको मूल्य र राम्रो उपकरण को लोकप्रिय भयो भन्ने तथ्यलाई छ। उहाँले आफ्नो पूर्ण सेटमा कम अन्त मोडेल को श्रेणी, तर अझै पनि डिजिटल साधन प्यानलमा belonged हुनत उपलब्ध भएको छ।
हुड अन्तर्गत के?
को "फिएट Tempra" को पहिलो मोडेल पेट्रोल 4-सिलेंडर शक्ति एकाइ संग प्रस्ताव राखे। त्यहाँ तीन पेट्रोल भिन्न र एक डिजेल थिए। तिनीहरूलाई सूची गर्नुपर्छ।
पेट्रोल इन्जिन 1.4, 1.6 र 2.0 लिटर को मात्रा घमण्ड गर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो शक्ति 76 "घोडाहरू" थियो। तर 1992 मा, हामी बाहिर आधुनिकीकरण लगे र क्षमता 69 HP गर्न गिर तर इन्जिन एक उत्प्रेरक र इन्धन इंजेक्टर फेला छ। 1.6-लीटर एकाइ आकर्षित अप 77 "घोडा", र मात्रा2लिटर को थियो जो इन्जिन, सबैभन्दा शक्तिशाली थियो - 113 HP यो इन्जिन multivpryskom उत्प्रेरक र इन्धन घमण्ड।
डिजेल इन्जिन मात्र 65 मात्रा 1.9 लिटर मा "घोडाहरू" उत्पादन गर्छ। तर त्यहाँ पनि टर्बो संस्करण थियो। यो 90 HP घमण्ड
यी शक्ति एकाइहरु कार "फिएट Tempra" थिए छन्। इन्जिन, प्रसंगवश, को 4- र 5-गति "संयन्त्र" संग प्रस्तावित गरिएको छ। र 1991 मा, हामी संग 4-गति सामान्य मोड र खेल संग सुसज्जित छ जो "स्वचालित", एक मोडेल देखा पर्न थाले।
खैर, हुड अन्तर्गत सबैभन्दा शक्तिशाली इन्जिन ब्राजील बिक्रि थिए संस्करण सेट। यो 2-लीटर, 4-सिलिन्डर, 16-वाल्व थियो, र 127 HP उत्पन्न खैर, ब्राजील मा उत्पादन युरोपेली मोडेल सम्मेलन लाइन बन्द अब हो पछि केही समय गयो।
1990 मा, मे मा, नयाँ मोडेल बाहिर आए। यो फिएट Tempra द.प. भनिन्थ्यो। हुड अन्तर्गत पेट्रोल 1.8-लीटर इन्जिन जसको शक्ति 109 HP थियो, स्थापित 1992 देखि, मोटर र उत्प्रेरक र इन्धन इंजेक्टर सुसज्जित गर्न थाले। एकै समयमा त्यहाँ स्थायी चार पाङ्ग्रा ड्राइव, ventilated डिस्क ब्रेक र ABS प्रणाली संग संस्करण थियो। कारण यो थप र अधिक लोकप्रिय गर्न मोडेल "फिएट Tempra" थियो। डिजेल, बाटो गरेर, हुड, पनि, 1992 मा एक मोडेल स्थापित गर्न थाले। यो 90 HP उत्पादन र अझै यसलाई turbocharged थियो।
"फिएट Tempra" मूल मान्छे परिवार यात्राको लागि यो किन्न लागि सिर्जना गरिएको थियो, यो आवश्यक बताउन छ, र कसरी यो सुविधाजनक छ। एउटा उदाहरण, द.प. को माथि संस्करणको रूपमा।
कार मा सैलून एकदम रोचक। उहाँले केहि डिजाइन, अझै Ergonomic मामलामा असामान्य छ। ढोका असबाब र सीट उच्च गुणवत्ता साबर, अब पनि उचित सफाई राम्रो दिखेगा जो छन्। भौतिक प्यानल सुसज्जित एक नरम-स्पर्श कोटिंग पनि राम्रो संग।
खुसी जलवायु नियन्त्रण: यो व्यवस्थापन गर्न र प्रभावकारी योजना धेरै सजिलो छ। hydrocorrector स्वचालित हेडलाइट्स उपस्थिति खुसी। पनि उपकरण सूचीमा ABS, लिफ्ट, समायोजन र armrests, सुरक्षा र राम्रो श्रवणशास्त्र, यांत्रिक Windows संग अगाडि सिट पनि समावेश छ।
यो विशेषज्ञहरु ड्यासबोर्डमा डिजाइन ठूलो काम गरेका भन्ने कुरा स्पष्ट छ। यसमा त्यहाँ सबै सङ्केत गर्छ सजिलै पढ्न छन्, केही superfluous छ। तर, एक सानो drawback छ। संकेतक गरौं र मोटर चालित छन्, यो तीर "जम्प" र "मिलान" जब गरिब सतहहरु ड्राइभिङ छ।
तर पर्याप्त मिसिन भित्र स्पेस। खैर, सबै सिट (पनि फिर्ता पंक्ति मा) सीट बेल्ट संग सुसज्जित छन्। ट्रंक सानो छ, तर यो निकै यसलाई वृद्धि जो सीट परिवर्तन गर्न सम्भव छ। सामान आवरण दुई भागहरु हुन्छन् रूपमा लामो समय भार सजिलो प्राप्त गर्न राखे। कुरा हो, भित्र लोड गर्न सकिँदैन मुख्य आवरण बन्द गर्नुहोस्। यो धेरै सुविधाजनक छ।
यो कार विरोधाभासी हुन्छ समीक्षा गर्नुहोस्। धेरै हदसम्म कारण राम्रो अवस्थामा कार पाउन गाह्रो छ आज भन्ने तथ्यलाई गर्न। शारीरिक अपर्याप्त जस्ती। को को बुरा अर्को यो कार यसलाई खाली छ भने व्यवस्थापन गर्न गाह्रो छ भन्छन्। यो किनभने मेसिन "बाउन्स।", 90 मी / घन्टा को गति भन्दा बढी छैन यो मामला मा सबै भन्दा राम्रो छ
तर कार को लाभ धेरै (सान्त्वना र सानो घर को Ergonomics बाहेक)। पहिले, मोडेल "फिएट Tempra 'भागहरु धेरै सस्तो हो। र साथै, यो सकेसम्म सरल कायम गर्न। तपाईं, तपाईं अन्य कार देखि र पनि "LADA" बाट भागहरु टिप्न सक्नुहुन्छ (सामान्यतया कारण disassembly लागि यो मोडेल को यो वा त्यो क्षेत्र केही कार मा भन्ने तथ्यलाई गर्न) स्पेयर पार्ट्स पाउन भने पनि गर्न सक्नुहुन्छ।
सामान्यतया, मेशिन धेरै आर्थिक छ। कसरी यी कार स्वामित्व गर्ने केही मानिसहरू, सावधान सञ्चालन संग 80 हजार किलोमिटर मात्र स्टार्टर, को एक-स्तम्भ र समय बेल्ट परिवर्तन हुनेछ भन्न। निस्सन्देह, तेल र मोमबत्ती बारेमा पनि, छैन भूल हुनुपर्छ।
अन्तमा यो तपाईं आज खरिद गर्न सक्नुहुन्छ धेरै यो कार कसरी बारेमा कुरा गर्न लायक छ। सिद्धान्त, एक 2-लीटर 113-अश्वशक्ति इन्जिन राम्रो हालत मा गाडी 80-100 हजार लागि किनेको गर्न सकिन्छ। तपाईं मोडेल र कम पैसा फेला पार्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँले ध्यान गल्तीलाई र खियाले लागि कार जाँच गर्नुपर्छ।
सिद्धान्त मा, यो एक राम्रो फराकिलो र साना मुद्रा को लागि राम्रो कार छ। ध्यान दिएर यो सम्हाल्न भने, थप यो धेरै वर्ष को लागि आफ्नो मालिक सेवा गर्नेछन्।
प्रसारण तेल: जो राम्रो विकल्प विशेषताहरु,
कार "फिएट प्रकार" को इतिहास: एक नयाँ नजर पुरानो नाम को फिर्ती
एक तर्कसंगत निर्णय जाडो को मृत्यु मा - आफ्नै हातले इन्जिन Heating
"Fiat Uno" कार को समीक्षा
को स्टीयरिंग रैक मा एक Knock: हटाउन कसरी?
"किया Sorento प्रधानमन्त्री" (किआ Sorento प्रधानमन्त्री): वर्णन, लाभ र बेफाइदा, मूल्यहरू समीक्षा
"मेगा Dybenko" - सारा परिवारको लागि बाँकी
जीवन मामला को लागि पाइ नुस्खा
को hymen के छ। सुझाव कन्याहरूले
एक उज्ज्वल फिटनेस प्रयास गर्नुहोस्! (Cherepovets) "एलेक्स फिटनेस"
रूसी निर्माता देखि न्यानो overalls "ArktiLayn": समीक्षा
संसारको सबैभन्दा महंगा घडी के हुन्?
चोकर STARK। अभिनेता इसहाक Hempstead-राइट र आफ्नो चरित्र
Ekaterina Kisten: परिवार वा काम?
प्रसूति राजधानी: संघीय देखि क्षेत्रीय भुक्तानी विपरीत
के तपाईं कहिल्यै सुत्न चाहन्छु भने के गर्ने?
Fillers संग cheekbones वृद्धि: समीक्षा, फोटो
अमीनो एसिड तरल: प्रयोगकर्ता पुस्तिका